ဘယ်လောက်ရမလဲ ??? | အိုးဘို
Tags: ဘယ်လောက်ရမလဲ ???
ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ – Mandalay Gazette မှာဖော်ပြထားတာပါ..အားလုံးရေးလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်…
မြန်မာပြည်က ဘလော့ဂ် ရေးသူတွေ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်နဲ့ ဖိုရမ်စတာတွေမှာ တင်သလို ဒီမှာ စာတပုဒ်လာတင်ရင် ပွိုင့် (၁၀၀၀) ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(အခြားနိုင်ငံနေသူများအတွက် ပွိုင့်အား ငွေသားအဖြစ် လဲလှယ်လွဲပေးမည်မဟုတ်ပါ၊ အဆိုပါ ပွိုင့်များရဲ့ တ၀က်ကို ငွေသားအဖြစ် ပြောင်းပေးပြိး မြန်မာပြည်ရဲ့မိဘမဲ့ ကလေးများအတွက် ကျောင်း တကျောင်းကျောင်းကို (မန်ဘာများရဲ့အတည်ပြုချက်ရပြီး)မှပေးလှူပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်)
စာတပုဒ်ဟာ စာလုံးရေ အနည်းဆုံး (၅၀၀၀) ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မပြည့်ရင်တော့ ပွိုင့် (၃၀၀) ပဲ ရမှာပါ။ပြည့်ရင် ၁ထောင်ပွိုင့်ရပါမယ်။ စာလုံးရေကလည်း အလိုအလျှောက်တွက်ပါလိမ့်မယ်။ (စာရိုက်နေတဲ့နေရာရဲ့ ဘယ်ဖက်အောက်ကိုကြည့်ပါ)
၀င်ငွေရဖို့အတွက် ပထမဆုံးဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ Register လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး သာမန် Blogspots.com, WordPress.com မှာစာတွေတင်သလို တင်သွားကြရမှာပါ။ Register လုပ်ခြင်းအတွက် သီးသန့် ပွိုင့် (၁၀၀၀)ထပ်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ပထမဆုံး မှတ်ပုံတင်ပြီး ရေးနေကျအတိုင်း ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ ချက်ချင်းမရေးသေးပဲ ဒီမှာ အရင်လာရေးတင်ရင် ပွိုင့်(၂၀၀၀)ရမှာပါ။
မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ သူအနေနဲ့ Comment တွေလိုက်ရေးပြီး ပွိုင့်တွေရနိုင်ပါသေးတယ်၊ Commentတခုအတွက် ပွိုင့်(၅၀) ရပါမယ်။
အဓိတ်ပါယ်မရှိတဲ့ ဟုတ်ကဲ့တို့ ။ ကျေးဇူးပါတို့၊ ထောက်ခံပါတယ်တို့တော့ တင်လို့မရပါ။ ကိုယ်ရဲ့ သဘောထားကို ပေါ်လွင်အောက်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တခြား လိုက်နာရမယ့် အသေးစိတ်တွေကို အောက်မှာချရေးပေးသွားပါမယ်။အခု ပွိုင့်တွေဟာ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက် စဖွင့်လှစ်တဲ့ ကာလ တခုအတွက်သာဖြစ်ပြိး အချိန်မရွေး ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏတခုအပေါ်မူတည်ပြီး မှတ်ပုံတင်လာသူအရည်အတွက်နဲ့ ချိန်ဆရမှာမို့ ပါ။ ဒါပေမဲ့ စာေ၇းကောင်းသူတွေအတွက်တော့ တိုးလို့ သာ တက်လာစရာအကြောင်းရှိပါတယ်၊ မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သူတွေ အင်တာနက်တခွင် လိုက်သွားစီးမြောနေပြီး ဘလော့ဂ်တွေ အချိန်ကုန်ခံရေး၊ Facebook မှာ စာတွေတင်နေတာထက်စာရင် အကျိုးရှိပြီး ငွေကြေးရနိုင်တဲ့ စံနစ်တခု အကောင်အထည်ဖေါ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သတင်းနဲ့စာပေ၊ ရသ၊ တွေရဲ့ အရည်အသွေး၊ တာဝန်ယူရဲမှု တို့တိုးတက်လာကြစေဖို့ လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။
သတင်းရယူလာတဲ့ အခြေအမြစ်က ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ရင် ဘယ်နေရာကရတယ်ဆိုတာ ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတင်တာမှာ ကိုယ်တိုင်ရိုက်တာမဟုတ်ရင် ဓါတ်ပုံဆရာ အမည်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအပေါ်တည်မှီပြီး သုံးသတ်တာတွေ။ ဆွေးနွေးငြင်းခုံတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်မန်င့် နေရာမှာရေးပြီးဆွေးနွေး၊ ငြင်းခုန် လုပ်ကြစေချင်ပါတယ်။ ကွန်မင်န့်အတွက်လည်း သီးသန့် ပွိုင့်တွေပေးထားပါတယ်။ ပုဂိုလ်ရေးထိခိုက်မှုကိုတော့ လုံးဝ(လုံးဝ) ခွင့်မပြုပါ။ သတိပေးခံရမှာဖြစ်ပြီး ၃ကြိမ်သတိပေးခံရပြီးရင် မန်င်ဘာ( စာရေးသူ) အဖြစ်က ဖျက်သိမ်းခံရပါမယ်။
Categories ဆိုင်ရာ တွေမှာ ရွေးချယ်တင်စေလိုပါတယ်။ တခုထက်ပိုပြီး ချက်ခ်မတ် လုပ် လို့ရပါတ်။ ဒါမှ ဖတ်သူပိုများပြီး စိတ်ဝင်စားမှုစကေးလ်သိနိုင်မှာမို့ ပါ။
တဂ် ကိုလည်း လိုရာစာသားကို ဖြည့်ပေးစေလိုပါတယ်။ ဒါမှ တခြား ရာဟူးတို့ ဂိုဂယ်တို့ကနေ သိနိုင်ရှာနိုင်မှာမို့ ပါ။
အခုဆို ထုတ်ဝေခဲ့တာ လေးနှစ်ထဲရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအသိအမှတ်ပြု သတင်းမီဒီယာတခုဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းဆောင်းပါးရေးဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ နေ့စဉ်၊ လစဉ်သတင်းတွေကို လေ့လာပြီး (သတင်းရယူရာ အခြေအမြစ်) နဲ့တကွ ခြုံငုံစဉ်းစားချရေးတာမျိုးကို ခွင့်ပြုပါတယ်။ သတင်းဆောင်းပါးကို အထူးသဖြင့် အလိုရှိပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ မြန်မာပြည်က ကလေးလူငယ်များ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအကြောင်းမျိုးကို ကလေးတွေအင်တာဗျူးနဲ့တကွ ဓါတ်ပုံနဲ့ဖေါ်ပြပေးမယ်ဆိုရင် သတင်းစာမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခံရမှာဖြစ်ပြီး ပွိုင့် ၃သောင်း၊ ဒေါ်လာ ၃၀ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကျောင်း(တက္ကသိုလ်တွေ)၊ အန်ဂျီအိုတွေနဲ့ ယူအက်စ်အစိုးရကခေါ်တဲ့ ပညာတော်သင်တို့ ၊ အစည်းအဝေးတို့ ၊ဆင်မနာတို့မှာ တင်တဲ့အခါ ထိထိရောက်ရောက် ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် ထောက်ခံချက်လည်း မန္တလေးဂေဇက်က တရားဝင်ထုတ်ပေးပါမယ်။ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက နှစ်စဉ် ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
ရသစာပေဖြစ်တဲ့ ၀တ္ထု၊ကဗျာ၊ပျို့လင်္ကာ တွေလည်း ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ရာ Category မှာတင်နိုင်ကြပါတယ်။ သတင်းစာမှာတော့ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခံရဖို့ အခွင့်နည်းမှာပါ။ ပုံနှိပ်သတင်းစာဟာ သတင်းကို ဦးစားပေးပါတယ်။
ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ – Mandalay Gazette
ဗျောက်အိုးလာပြီ (from Faces Magazine)